MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardPersonal Pagemm Archives - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Category: Personal Pagemm
Super Lann mm
Hello! စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ခံစားခွင့်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမယ့် MPT ရဲ့ “စူပါလန်း” အစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းအသစ်၊ အသစ်တွေမှာပါဝင်ပြီး အများနဲ့မတူတဲ့ အထူးခံစားခွင့်တွေကို ရယူဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ MPT ရဲ့ ဒီလိုအထူးအစီအစဉ်ကို လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်ဘူးနော်။
သင့်အလိုကျ အကြိုက်တွေ့မယ့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မျိုးစုံ၊ lucky draw ကံစမ်းခွင့်တွေနဲ့ အခြားသော အစီအစဉ်များကို MPTကနေ သေချာစီစဉ်တင်ပြပေးသွားမှာပါ။
MPTနဲ့ဆို အမြဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေစေရမယ်နော်!
MPT နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေပြီး ဘယ်လိုအထူးခံစားခွင့်တွေ ရယူနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြစို့။
MPT ပွိုင့်တွေနဲ့ ထောဘီဖုန်းဘေလ် (၅)ဆ လဲလှယ်နိုင်မည့် မေလအတွက် အထူးအစီအစဉ်
MPT Club Customers တွေ အတွက် မေလမှာ ပုံမှန်ထက် ထောဘီ ဖုန်းဘေလ် (၅) ဆ လဲလှယ်နိုင်မယ့် အစီအစဉ် ပြန်လာပါပြီ။ လဲလှယ်လိုက်တဲ့ ထောဘီကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းများ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ (၁၅) ရက်နေ့ မှ (၃၁) ရက်နေ့ အထိသာဖြစ်တာကြောင့် MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် *345*3*1*4# (သို့) MPT4U App မှတဆင့် MPT ပွိုင့်များကို ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း ထောဘီ(၅ဆ) ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် အခုပဲ လဲလှယ်လိုက်ပါ။
ထောဘီ (၅)ဆ ဖုန်းဘေလ်
၅၀ ပွိုင့် ၂၀၀ ကျပ်
၉၉ ပွိုင့် ၄၀၀ ကျပ်
၁၉၉ ပွိုင့် ၈၀၀ ကျပ်
၂၉၉ ပွိုင့် ၁၃၀၀ ကျပ်
၃၉၉ ပွိုင့် ၁၇၅၀ ကျပ်
၇၉၉ ပွိုင့် ၃၆၀၀ ကျပ်
ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်ကောင်းများကို မကြာခင်စီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါနော်။
vivo v23e mm
Display AMOLED, (1080 x 2400 pixels)
MPT Bonus 1GB + 50min (on-net) x 6months
၁။ vivo V23e ပရိုမိုးရှင်းဆိုတာဘာလဲ။
vivo V23e smart phone ကို သတ်မှတ်ထားသော ပရိုမိုးရှင်းကာလတွင် ၀ယ်ယူပြီး MPT sim card နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုပါက လစဥ်လတိုင်း 1GB ဒေတာ နှင့် 50 မိနစ် ကို ၆ လတိုင်တိုင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ vivo V23e လက်ဆောင်ကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ပထမဦးစွာ vivo V23e ဖုန်းကို MPT sim card နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် ဖုန်းငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်ဖြည့်သွင်းပြီး လက်ဆောင်ကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုဖုန်းငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်သည် မိမိလက်ငွေစာရင်းထဲတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာသုံးရန် ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
vivo V23e ဖုန်းနှင့် MPT sim card ကို နေ့ ၁ တွင် အတူတကွသုံးပြီး ဖုန်းငွေ ၃၀၀၀ ထောင် ကို ထိုနေ့တွင် ဖြည့်ပါက လက်ဆောင် ပက်ကေ့ချ်ကို နေ့ ၂ တွင် ရရှိပါမည်။
vivo V23e ဖုန်းနှင့် MPT sim card ကို နေ့ ၁ တွင် အတူတကွသုံးပြီး ဖုန်းငွေ ၃၀၀၀ ထောင် ကို နေ့ ၂ တွင် ဖြည့်ပါက လက်ဆောင် ပက်ကေ့ချ်ကို နေ့ ၂ တွင် ရရှိပါမည်။
၈။ vivo V23e ဖုန်း ၏စျေးနှုန်း မည်မျှလဲ။
vivo V23e ဖုန်း ၏စျေးနှုန်းမှာ ၆၂၉,၈၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ vivo V23e ဖုန်း ကို မည်သည့်နေရာများတွင် ၀ယ်ယူနိုင်မည်နည်း။
vivo V23e ဖုန်း ကို vivo ဖုန်းဆိုင်များ၊ MPT ဖုန်းဆိုင်များ နှင့် အခြားဖုန်းအရောင်းဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၀။ vivo V23e ဖုန်းအတွက် မည်သည့်နေရာများတွင် ပြုပြင်နိုင်သနည်း။
vivo V23e ဖုန်းကို အောက်ပါ ပြုပြင်ရေးစင်တာများတွင် ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
၁၁။ vivo V23e ဖုန်းကို မည်သည့်အချိန်တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသနည်း။
vivo V23e ဖုန်းကို မတ်လ ၅ ရက် ၂၀၂၂ မှ စတင်ပြီး ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
vivo v23 mm
Samsung A53 mm
Samsung mobile list mm
Price : 1,049,000 MMK
Display : 6.5” FHD+ Super AMOLED, Infinity O Display HID(120Hz)
Memory & Storage : 256 GB ROM + 8GB RAM
SIM Capability : Dual SIM(nano-SIM, dual stand-by)
Chipset: Exynos 1280(Papaya 2x CA78 2.4GHz, 6x CA55 2.0GHz)
CPU: Octa-core (5 nm)
oppa mobile list mm
Price : 479,900 MMK
Display : 6.56 inches IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) (720 x 1612 pixels)
Memory & Storage : 128 GB ROM + 6GB RAM
OPPO A76 mm
Huawei P50 Pro mm
Huawei Nova8i mm
Tutu chat mm
“တူတူChat” ဆိုတာ ဘာလဲ ။
“တူတူChat” သည် MPT မှ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ 2G, 3G နှင့် 4G/ LTE ကို သုံးစွဲသူများ၏ နေ့စဉ် ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန် ဖြေကြားပေးမည့် Live Chatbot ဝန်ဆောင်မှု တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည် ။
“တူတူChat” ဟု အမည်ပေးထားသည့် MPT ၏ တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန် ဖြေကြားပေးသည့် Live Chatbot ဝန်ဆောင်မှုတွင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် ဒေတာနှင့် အသံပက်ကေ့ချ်များ၊ အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ (VAS) ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ လက်ကျန်ဖုန်းဘေလ် စစ်ဆေးခြင်းများအပြင် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၊ MPT Club ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် MPT ၏ ပရိုမိုးရှင်းများကို အချိန်မရွေး စုံစမ်းမေးမြန်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Chatbot ဝန်ဆောင်မှုများသည် သုံးစွဲသူများအား မိုဘိုင်းလ် ဝန်ဆောင်မှုများသာမက အိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက် (FTTH) နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း(B2B)သုံး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုပါ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
“တူတူChat” ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းကို အောက်ပါလင့်များမှတစ်ဆင့် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ MPT သုံးစွဲသူများအတွက် MPT ရဲ့ "တူတူChat" လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ ..
“တူတူChat” ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ ။
“တူတူChat” အား MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း နှင့် တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတို့တွင် အချိန်မရွေး စုံစမ်းမေးမြန်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“တူတူChat” ဝန်ဆောင်မှုကို MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းမှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ။
“တူတူChat” ဝန်ဆောင်မှုကို တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ။
* အဆင့် ၃ ကို ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် သုံးစွဲသူမျာ၏ လိုအပ်ချက်များကို MPT Chatbot ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။